Sexting - किशोरों को बीच एक खतरनाक प्रवृत्ति
Sexting - एक खतरनाक प्रवृति | कामुकता र प्रबुद्धता
पीडितहरूलाई प्रभावित व्यक्तिहरूलाई गम्भीर खतरा हुन सक्छ
समापन समाप्ति - सेप्टेम्बर कम गर्नु हुँदैन!
शब्द sexting क्रमशः सेक्स र पाठ शब्दहरु बाट बनाइएको छ र व्हाट्सएप वा फेसबुक जस्तै सामाजिक सञ्जाल मार्फत कामुक सामग्री को प्रसार समावेश गर्दछ। एक व्यापक अर्थ मा, sexting मा पोस्टिङ र संदिग्ध पनीहरु मा पनि निजी भागहरु मा फोटो साझा गर्न पनि समावेश छ।
यो युवती प्रवृति अब अत्यन्त संदिग्ध रूपमा मानिन्छ, किनकि पठाइएका वा अपलोड गरिएका तस्विरहरू प्राय: गलत हातमा पर्छन्।
अनलाइन ट्रेन्ड साइक्सिंग - वर्चुअल स्ट्रिपटीज
कहिलेकाहीँ, तस्बिरहरू मित्र वा कुनै अन्य व्यक्तिको लागि अश्लील चित्रहरूमा समाप्त हुन्छ जुन छविहरू व्यक्तिगत सहमति बिना प्रदायकद्वारा प्रयोग गरिन्छ।
मूलतया, अन्तरगत सामग्रीको साथ पठाइएका सन्देशहरू एक खतरा हो, किनकि यो पलबाट धेरै प्रभावकारी छ र अब एक सम्भावना पुन: प्राप्तिमा नियन्त्रण छैन।
किन युवाहरु बीच धेरै लोकप्रिय छ?
विशेष गरी दाजुभाइका किशोरहरूले अरू साथीहरूलाई केही साबित गर्न चाहन्छन्। प्राय: कामुक सामग्रीहरू साथीहरू बीचमा पठाइएपछि तिनीहरूका शरीरका गुणहरूलाई प्रदर्शन गर्न र तिनीहरूलाई प्रशंसा गर्न पठाइन्छ।
यस तरिकामा, जवानहरूले आफ्नै आत्म-सम्मान बढाउँछन् र यसरी sexting बाट लाभ उठाउँछन्। यसको अतिरिक्त, कामुक सामाग्री पठाउनु मुख्य रूप देखि साझेदार आफ्नो प्रेम र यौन उत्साह देखाउने सम्बन्ध मा प्रयोग गरिन्छ।
बेशक, sexting प्रयोगकर्ताहरु को लागि केहि खतराहरु खडा हुन्छन्, किनकी यो मुख्यतः युवाहरु हो। तपाईलाई थाहा छ, सम्बन्ध यस उमेरमा धेरै लामो छैन र अन्यथा दबाव गर्न एक पार्टीले प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा, फोटाहरूको प्रकाशन प्रायः धम्की दिइन्छ, प्राय: सोशल नेटवर्कहरूमा फेसबुक वा ट्विटर।
निष्कर्ष - हेर्नुहोस्, जहाँ तपाईंले आफैलाई केहि कुरा बताउनुहुन्छ!
तर अनियमित रूपमा यो सामाग्री पठाउन आउन सक्छ, यदि व्हाट्सएप सन्देश, उदाहरणको लागि, गल्तीसाथ धेरै व्यक्तिलाई पठाइएको थियो। यसको अतिरिक्त, फोटाहरू प्रायः स्वचालित रूपमा भण्डारण गरिन्छ, जुन तेस्रो व्यक्तिहरूको आन्तरिक छविहरू देखाउनका लागि ग्यालेरी देखाउँदा शंकास्पद अवस्थाको नेतृत्व गर्न सक्छ।
कम उमेरका व्यक्तिहरूको नग्न चित्रहरूको स्वामित्व यसकारण एक गम्भीर खतरा हो, किनकि यसले पहिले नै बच्चा पोर्नोग्राफीलाई विचार गर्न सक्दछ।
तपाईं कसरी खतरनाकहरू विरुद्ध रिसीभर वा कन्सेन्सरको रूपमा आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ?
प्रेषकको रूपमा पठाउनु अघि कामुक सामग्री नियन्त्रण बढ्यो। तपाईंले दुई पटक प्राप्तकर्ता रेखा जाँच गर्नुपर्छ र फोन सेटिङहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, फेसबुकमा छविहरू अपलोड गर्दा, दर्शकहरूलाई निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, तील्टहरू अनुहार वा विशेष सुविधाहरू देखाउन हुँदैन, ताकि यो शिकारको रूपमा वितरणमा क्षतिग्रस्त हुँदैन। यदि एक Sexting नग्न तस्वीरहरु मा प्राप्त हुन्छ भने, एकले सम्भवतः अवस्थित आकर्षक आकर्षणको बावजूद तस्बिर मेटाउनुपर्दछ।
यस उपायले अब एक (बाल) पोर्टलोग्राफिक सामग्रीको स्वामित्वमा रहेको छैन र त्यसैले निश्चित रूपले सुरक्षित पक्षमा। यसको अतिरिक्त, साथी वा हानि द्वारा स्मार्टफोन को दुरुपयोग को मामला मा अवांछित प्रकाशन को जोखिम।
Sexting बेवकूफ धेरै धेरै जवान मान्छे द्वारा प्रयोग गरिन्छ, जो अवांछित प्रसार को खतरा बढ्छ। निस्सन्देह, एक किशोरावस्थाको रूपमा, तपाईं साथीहरु द्वारा दबाइको लागी अधिक सम्भावित हुनुहुन्छ र यसैले साथीहरूको दबाबबाट अंतरंग फोटोहरू पठाउनुहोस्।
यद्यपि, कुनै पनि बिना आफ्नै सहमति बिना पोर्नोग्राफिक वेबसाईटहरूमा कुनै पनि प्रकट हुन नसक्ने र यसैले लाखौ मानिसहरूको अगाडि साँच्चै नग्न हुन सक्छ।
यसैले, कम्तीमा खतरनाक खतराहरू र सम्भावनाका उपायहरू हेर्न कम्तिमा महत्त्वपूर्ण छ। तपाई सधैँ ध्यान दिनुहोस् कि तपाई वास्तवमा तस्बिरहरू पठाउनुहुन्छ र के तपाई गल्ती स्मार्टफोन सेटिङहरूको कारणले स्वतः स्वचालित रूपमा सबै सम्पर्कहरूलाई प्राप्तकर्ताको रूपमा सूचीबद्ध गर्दछ। विशेष रूपमा सिफारिस गरिएको कामुक सामग्रीको पठाउने हो जुन तपाईंलाई पहिचानयोग्य बनाइएको छैन र न त अनुहार र न कुनै अन्य विशेषताहरू।
अन्तमा, त्यहाँ सधै एउटा खतरा हो, त्यसैले तपाईले कम से कम यस युवा प्रवृत्तिको आवश्यकतालाई प्रश्न गर्नु पर्दछ।
संयोग यौन सम्पर्क कामुकता
कामुकता र भूमिका खेल्ने